အမေရိကန်စတိုင် Living ည့်ခန်းသုံးပရိဘောဂဇိမ်ခံဒီဇိုင်းထည်ထောင့်ဆိုဖာ, Chesterfield ဒီဇိုင်းထည်ချုပ်အိပ်ရာ – Baotian ပရိဘောဂကုမ္ပဏီ, Ltd.
Chesterfield ဒီဇိုင်းအနက်ရောင်အထည်အလိပ်ထောင့်ခေါက်, ခေတ်သစ်, သန့်ရှင်း, ဖက်ရှင်. အိတ်ဆောင်ကွိုင်ထိုင်ခုံကူရှင်၏ကြီးမားသောအပိုင်းအစတစ်ခုသည်အလွန်အဆင်ပြေပြီးပျော့ပျောင်းသည်. ရွေ့လျားနိုင်သောဒီဇိုင်းသည်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီးသပ်ရပ်နိုင်သည်. ရွှေသတ္တုခလုတ်များနှင့်သံမဏိခြေထောက်များသည်ဆိုဖာဒီဇိုင်းကိုပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်စေသည်.
ပစ္စည်း: Fabir, Stainless Steel, Plywood, အမြှုပ်, spring
အသွင်အပြင်: ခေတ်သစ်; Fashion, အမေရိကန်ပုံစံ
ထုတ်ကုန်အမည်: L couch, fabric sofa, Black Couch, Modern Couch
အဖုံးပစ္စည်း: Aniline Leather; Top grain Leather, Genuine Leather, Italian Leather
function ကို: Adjustable Headrest